पेरिस र सिङ्गापुरलाई पछि पार्दै संसारकै महँगो सहर बन्यो तेल अविव, सबैभन्दा सस्तो सहर कुन हो ? - fairnepal.net
पेरिस र सिङ्गापुरलाई पछि पार्दै संसारकै महँगो सहर बन्यो तेल अविव, सबैभन्दा सस्तो सहर कुन हो ?
FN December 3, 2021	No Comments
एजेन्सी । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (EIU) ले आफ्नो पछिल्लो वरियतामा इजरायलको तेल अवीभलाई विश्वको सबैभन्दा महँगो सहरको सूचीमा राखेको छ।
पेरिस र सिंगापुर संयुक्त रूपमा वरियतामा दोस्रो स्थानमा छन्। त्यसपछि जुरिच र हङकङ छन्। अर्कोतर्फ न्युयोर्क छैटौं स्थानमा छ भने जेनेभा सातौं स्थानमा छ ।-
Most expensive city of World: इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (EIU) ले विश्वभरका सहरलाई जीविकाको आधारभूत वर्गीकरण गरेको छ। यस वरीयतामा इजरायलको तेल अवीवलाई विश्वको सबैभन्दा महँगो सहरको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
संसारका अन्य शहरहरूको तुलनामा यहाँ बस्ने लागत धेरै उच्च छ। अघिल्लो रिपोर्टको तुलनामा यस पटक तेल अभिभ पाँच स्थान माथि उक्लिएको छ ।
विश्वभरी जीवनयापनको लागत सूचकांक १७३ सहरमा वस्तु तथा सेवाको अमेरिकी डलरमा मूल्यको तुलनाको आधारमा जारी गरिएको हो ।
यस वरीयतामा सिरियाको राजधानी दमास्कसलाई बस्नका लागि संसारकै सस्तो सहरको रूपमा वर्णन गरिएको छ । यस वरीयतामा सिरियाको राजधानी दमास्कसलाई बस्नका लागि संसारकै सस्तो सहरको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।
सस्तो सहरको वरियतामा लिबियाको त्रिपोली, उज्वेकिस्तानको तास्केन्ट, ट्युनिसियाको ट्युनिस, काजाकिस्तानको अल्माटी, पाकिस्तानको कराची, भारतको अहमदाबाद, अल्जेरियाको अल्जियर्स, अर्जेन्टिनाको ब्युनोस आयर्स र जाम्बियाको लुसाका शहर पनि समावेश छन्।
यस रैंकिंग बढ्नुमा डलरको तुलनामा तेल अवीवको राष्ट्रिय मुद्रा, शेकेल (एक प्राचीन यहूदी सिक्का), यातायात र घरायसी सामानको मूल्यवृद्धि मुख्य कारक रहेकाे बताइएकाे छ ।
पेरिस र सिंगापुर संयुक्त रूपमा वरियतामा दोस्रो स्थानमा छन् । त्यसपछि जुरिच र हङकङ छन्। योसँगै न्युयोर्क छैटौं र जेनेभा सातौं स्थानमा परेको छ ।
१ देखि १० सम्मको वरियतामा कोपनहेगन आठौं, लस एन्जलस नवौं र जापानको ओसाका सहर १० औँ स्थानमा छ । गत वर्षको सर्वेक्षणमा पेरिस, जुरिच र हङकङ संयुक्त रूपमा पहिलो स्थानमा परेका थिए।
यस वर्षको तथ्याङ्क अगस्ट र सेप्टेम्बरको हो। जब विश्वभर दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको थियो । सोही अनुसार स्थानीय मूल्यमा औसत ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जुन पछिल्लो पाँच वर्षयताकै तीव्र मुद्रास्फीति दर हो । EIU मा विश्वव्यापी जीवन खर्च प्रमुख उपासना दत्तका अनुसार, ‘कोरोना भाइरसको महामारीले लागू गरेको प्रतिबन्धका कारण सामानको आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो, जसका कारण भाउ बढेको हो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि…
Previous Previous post: कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित, यसरी हेर्नुस् प्राप्ताङ्क सहितकाे रिजल्ट
Next Next post: यी ५ लक्षण पुरुषमा देखिने गम्भीर रोगको संकेत हुन्, हल्का रुपमा नलिनुहोस्